Guinée-Bissau : Ahiana hitarika tsy filaminana ny fahafatesan’ny Filoha · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 05 Marsa 2009 8:50 GMT
Vakio amin'ny teny Français, Português, Español, Italiano, বাংলা, 繁體中文, 简体中文, bahasa Indonesia, English
Nisy namono ny alatsinainy 02 martsa vao mangiran-dratsy ny filoham-pirenena any Guinée-Bissau, Joao Bernardo Vieira, novonoin'ny miaramila mpioko raha iny izy nandositra niala ny trano fonenany iny. Nitranga ity vono olona ity ora vitsy taorian'ny nahafatesan'ny fahavalon'ny filoha hatry ny ela, mpitarika ny etamazaoro, ny jeneraly Batista Tagme, ny alin'ny alahady vokatry ny fipoahana baomba. Mbola tsy fantatra aloha ny tena anton'ny famonoana fa ahiana hitarika tsy filaminana izy ity ho an'ny firenena izay vao tanora tokoa ao Afrika Andrefana ao.
António Aly Silva [pt] no nanaraka ny vaovao araka ny fitrangany. Tao amin'ny vaovaony farany no nilazany fa nanokana 7 andro hisaonana ny firenena ary 2 andro handevenana. Mampanantena sary mandritra ny fandevenana rahampitso izy:
Alatsinainy 02 martsa amin'ny4:51
Nisy namono ve i Nino Vieira(?)
Maraina anjakan'ny herisetra
Niaina tao anatin'ny feom-basy izahay nandritra ny 30 minitra teo ho eo – basy izany! (AAS avy ao amin'ny fiara mandeha)
Alahady 01 martsa amin'ny 10:32 alina
Fihetsiketsehana miaramila tao Bissau
Nitrangana fipoahana mahery vaika tao amin'ny toby miaramila ao Guinée. Olona 4 no naratra hitako nentina teny amin'ny toeram-pitsaboana, ny 2 tamin'ireo may ary tena voa mafy tokoa. nandeha ny feo fa maty ny lehibe, ny jeneraly Tagme Na Waie. Izay no Guinée-Bissau eo an-tampon'ny heriny. Tena maharary ny manoratra ity vaovao ity.
Nanaitra an'i Jorge Rosmaninho [pt] ny vaovao tahaka itony ka niverina nitoraka bilaogy ao amin'ny Africanidades indray izy rehefa nijanona nadritra ny herintaona. Izy no namoaka ny sary eto ambany sady nametram-panontaniana:
Iza no namono ny anakiray voalohany? Nony farany, maty daholo izy anankiroa.
Ilay mpanao gazety Luis Castro [pt] no nanome vaovao mikasika ny fifandraisan'izy 2 lahy ireto:
fantatro tsara ny zava-misy marina iainan'i Guinée-Bissau sy ny filalaovana fitondrana any. Niainako ny ady an-trano tamin'ny 1998/1999, ny fifidiana, ny fanonganam-panjakana, nosamborina aho, natao fanadihadiana miaraka amin'ny basy eo an-dohako, voaheloka ho faty, ary voatery nitsoaka aho rehefa navotan'ny miaramila Portige. Tsy mahagaga ahy ny zava-mitranga omaly sy anio. Ny marina aza dia efa fotoana ela no niandrasako izao. Efa hatry ny ela no nifanolana ny Filoha Vieira sy ny lehibe (Tagma In Waie). Tadidiko fa nanjary momba i Tagma taorian'ny fampijaliana tamin'ny fahana herin'aratra nataon'ny mpomba an'i Nino teo amin'ny filahiany (nilaza izany tamiko izy nandritra ny fandraisam-peo natao azy), niady tamin'ny heriny rehetra izy nandritra ny ady. Taty aoriana, na dia nanampy azy hiverina tany Guinée-Bissau sy ho eo amin'ny fitondrana aza izy, dia nihatakataka tamin'i Nino i Tagma. Niharatsy ny toe-draharaha indrindra hatramin'ny nikasan'ny Filoha hanajanona ny fandaharan'asan'ny governemantan'i Carlos Gomes Junior. Lasa niara-dia tamin'ny praiministra izy, satria hoy izy io no voafidy, noho izany tokony hitondra izy amin'ny mahaolom-boafidy azy. Efa niandry fotsiny ny rehetra hoe tsy maintsy ho faty ny iray amin'izy 2 lahy. Na i Nino na i Tagma. Kanjo, niaraka maty izy ireo.
Malahelo ny zava-mitranga ny mpitoraka bilaogy amin'ny teny Portige sy ireo zanantany Portige fahiny ka nandefa hafatra ho an'ny vahoaka any Guinée-Bissau ho fiaraha-mientana: Avy any Cap Vert i João Dono [pt] :
Antenaiko fa ho tahaka ny tany Angola dia hiverina ny fandriam-pahalemana any Guinée-Bissau. Ny olona nanana tantara tahaka an'i Nino Vieira dia tahaka izao no hiafarany. Nifidy ny lalana nalehany izy, lalana izay nampitondra fangirifiriana ho an'ny rahalahantsika. Harahantsika ny ora sy ny minitra mahakasika ny fikorontanana tany Guinée-Bissau.
Avy any Cap Vert ihany i Cesar Schofield Cardoso [pt] :
Raha mijery ny vondrona misy ahy dia tsikaritro fa… tsy misy fandeferana any Guinée-Bissau. Manamaizina ny firenena indray ny devoly, mitam-piadiana ny rahalahantsika ary tsy mbola hainy ny fametrahana izany fitaovam-piadiana izany. Novonoina i Vieira vokatry ny fahafatesan'ny lehiben'ny miaramila. Foatoanan'ny fankahalana any Guinée.
Avy any Mozambika i Manuel de Araújo [pt] :
Manana antony maro isika tokony hanampiantsika an'i Guinée-Bissau hitady ny lalan'ny fiadanana sy ny fampiraisam-pirenena. Aiza ireo iraky ny fandriam-pahalemana? Aiza ny CPLP (Fikambanan'ny tany miteny Portige)? Aiza ny Fiombonam-be Afrikana? tsy azon'izy ireo hatao ve ny manampy ny rahalahantsika hifoka ny rivotra madion'ny fampiraisam-pirenena?
manampy izany avy any Angola i Eugénio Costa Almeida [pt] :
Enga anie ka ny fahafatesan'ireny 2 lahy mpifahavalo ireny hanampy ny vahoakan'i Guinée-Bissau hanangana ny vondron'ny fahamarinana sy ny fampiraisana izay hampitsahatra nt fifankahalana sy ny valifaty ary hahatonga an'i Guinée-Bissau ho firenena lehibe sy hamokatra be.
Misy mponina 1 600 000 any Guinée-Bissau ary hatramin'ny fahaleovantenany ny taona 1974 dia nanjakan'ny tsy filaminana foana izy. Vao haingana izay dia fantatra fa toerana fandalovan'ny fivarotana zava-mahadomelina avy any Amerika Afovoany sy Erôpa ity firenena ity.
Tantaran'ny Ginea-Bisao farany
26 Avrily 2018Afrika Avaratra sy Afovoany Atsinanana
25 Janoary 2017Angola